ယေရှု၏ဇာတ်လမ်းထဲမှာ "လူဆိုး" အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
တိုင်းပုံပြင်မကောင်းတဲ့ကောင်လေးရှိတယ် - အချို့ကြင်နာတဲ့လူကြမ်း။ ယေရှု၏ပုံပြင်ကိုအကျွမ်းတဝင်လူအများစုကသူ၏အသက်နှင့်ဝန်ကြီးဌာနကလွဲသွားရန်ကြိုးစားခဲ့သူကို "လူဆိုး" အဖြစ်ဖာရိရှဲတို့သည်တံဆိပ်ကပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်အဖြစ်, ဒီအများအားဖြင့်မှန်သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့တစ်ခုလုံးအဖြစ်ဖာရိရှဲတို့သည်သူတို့လုံးဝထိုက်ပါဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့ထုပ်ပိုးပြီးပေးထားပြီလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ခေတ်သစ်ကမျြးစာကဆရာ, ဆရာမပုံမှန်အား "ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ" အဖြစ်ဖာရိရှဲတို့စကားပြောနှင့်ဤစကားမှန်သည်။
အဆိုပါ Sadduccees (ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရေးယုံကြည်မှုများနှင့်အတူအလားတူအုပ်စုသည်) နှင့်အတူဖာရိရှဲတို့သညျယရှေုနေ့၏ဂျူးလူမျိုးကိုစိုးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှာများစွာသောသဘောတူညီချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
သို့ရာတွင်ထိုသို့ဖာရိရှဲတို့အများစုယဇ်ပုရောဟိတ်မဟုတ်ကြကြောင်းမှတ်မိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့ကဗိမာနျတျောနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ကြဘူး, မသူတို့ကဂျူးလူမျိုးအဘို့ဘာသာရေးအသက်တာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါသောကွဲပြားခြားနားသောယဇျပူဇျောထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ပေ။ အဲဒီအစား, ဖာရိရှဲတို့သည်အများအားဖြင့်သူတို့ကချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနှင့်ပညာတတ်ခဲ့ကြသည်ဓိပ်ပာထားတဲ့သူတို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လူလတ်တန်းစားမှစီးပွားရေးသမားများဖြစ်ကြသည်။ အခြားသူများကအရှင်ဘုရား, ဒါမှမဟုတ်ဆရာများဖြစ်ကြသည်။ သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းရှေ့နေများနှင့်ဘာသာရေးပါမောက္ခတစ်ဦးပေါင်းစပ်ခြင်းနဲ့တူ - အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်, သူတို့ကကြင်ကြင်နာနာ၏ယနေ့ကမ်ဘာပျေါတှငျသမ်မာကမျြးပညာရှင်များကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။
သောကြောင့်သူတို့ရဲ့ငွေကြေးနှင့်အသိပညာ၏, ဖာရိရှဲတို့ကသူတို့နေ့ရက်ကာလ၌ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကမျြးစာကိုမူလတန်းစကားပြန်အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ရှေးဟောင်းလောကရှိလူအမြားစုကစာမတတ်သူခဲ့ကြသည်သောကြောင့်, ဖာရိရှဲတို့သညျဘုရားသခငျ၏ပညတျကိုနာခံဖို့အမိန့်ထဲမှာလုပ်ဖို့လိုအပ်သောအရာကိုလူအသို့ပြောသည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်, ဖာရိရှဲတို့တရားဝင်မျြးစာကိုအပေါ်တစ်ဦးမြင့်မားသောတန်ဖိုးကိုတင်လိုက်တယ်။ သူတို့ကဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ပြင်းထန်စွာအရေးကြီးသောခဲ့ယုံနဲ့သူတို့က, လေ့လာနေကျက်မှတ်လျက်, ဓမ်မဟောငျးကမျြးဥပဒဩဝါဒပေးသို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအများကြီးထားတော်မူ၏။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်ယေရှုနေ့၏ဘုံလူတို့သည်မိမိတို့ကျွမ်းကျင်မှုအဘို့နှင့်ကမျြးစောငျမြား၏အဘို့သန့်ရှင်းထောက်ဖို့သူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒများအတွက်ဖာရိရှဲတို့လေးစား။
ဖာရိရှဲတို့ "ဆိုးယောက်ျားများ" ရှိသနည်း
ကျနော်တို့ဖာရိရှဲတို့ကမျြးစာကိုအပေါ်တစ်ဦးမြင့်မားသောတန်ဖိုးကိုထားရှိနှင့်ဘုံကလူတွေလေးစားခဲ့လက်ခံလျှင်, သူတို့ကခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာဒါအဆိုးမြင်ခဲ့ကြသည်အဘယ်ကြောင့်နားလည်ရန်ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာအဆိုးမြင်ခဲ့ကြသည်မျှသံသယရှိပါတယ်။
7 သူ၌ဗတ်တိဇံရာမှလာမယ့်ဖာရိရှဲနှင့်ဇဒ္ဒုကဲများတို့သည်လည်းမြင်လျှင်, သူကလညျး: "သင်အထဲမှာမြွေဆိုးငှါလာကြသည်ကိုယောဟန်! ဘယ်သူလာမယ့်ဘေးဒဏ်မှပြေးသွားရရန်သင့်အားသတိပေးခဲ့သည်? 8 နောင်တရခြင်းနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်အသီးထုတ်လုပ်။9ထိုအခါ '' သည်ငါတို့အဘအာဗြဟံသည်ရှိသည်။ '' ကိုသင်ကိုယ်ကိုကိုယ်ပြောနိုင်စဉ်းစားကြဘူး ကျွန်မဤကျောက်ထဲကဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံသားအဘို့ပေါ်ထွန်းစေနိုင်သည်ကိုသင်ပြောပြ။ 10 ပုဆိန်အပင်တို့၏အမြစ်မှာပြီးသားဖြစ်တယ်, ကောင်းသောအသီးမသီးသောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုခုတ်လှဲမီးထဲသို့ချပစ်လိမ့်မည်။
မဿဲ 3: 7-10
25 "သင်မင်္ဂလာရှိ၏, ပညတ်တရား၏ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ဖာရိရှဲတို့, သင်လျှို့ဝှက်! သငျသညျဖလား, ပန်းကန်၏အပြင်ဘက်တွင် clean, ဒါပေမယ့်အထဲမှာသူတို့လောဘနှင့် Self-အလိုလိုကျလှနျးခွငျး၏အပြည့်အဝရှိပါတယ်။ 26 မျက်မမြင်ဖာရိရှဲ! ပထမဦးစွာဖလား, ပန်းကန်၏အတွင်းပိုင်းသန့်ရှင်းရေး, အဲဒီနောက်ပြင်ပတွင်လည်းစင်ကြယ်၏ဖြစ်လိမ့်မည်။
27 "သင်မင်္ဂလာရှိ၏, ပညတ်တရား၏ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ဖာရိရှဲတို့, သင်လျှို့ဝှက်! သင်ကပြင်ပမှာပေါ်ပေမယ့်အတွင်းပိုင်းအပေါ်လှပသောကြည့်ရှုရသောအဖြူသုတ်သင်္ချိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏သေလွန်သောသူတို့သည်နှင့်အရာခပ်သိမ်းမစင်ကြယ်သော၏အရိုးတို့ကိုအပြည့်အဝရှိပါတယ်။ ထိုနည်းတူ 28, ပြင်ပပေါ်တွင်သင်ဖြောင့်မတ်အဖြစ်လူတွေကိုပေါ်လာပေမယ့်အတွင်းပိုင်းပေါ်တွင်သင်လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်ဒုစရိုက်အပြစ်သည်အပြည့်အဝရှိပါတယ်။
မဿဲ 23: 25-28
ကျောက်အိုးတို့ကို! ဒါကြောင့်အဘယျကွောငျ့ဖာရိရှဲတို့ဆန့်ကျင်ထိုကဲ့သို့သောခိုင်မာတဲ့စကားလုံးများကို? အဲဒီမှာနှစ်ဦးကိုအဓိကအဖြေကိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပထမဦးဆုံးအထက်ယေရှုရဲ့စကားအတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါသည်: ဖာရိရှဲတို့သည်မှန်မှန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မစုံလင်မှုကိုလျစ်လျူရှုနေချိန်တွင်အခြားလူများကမှားလုပ်နေခဲ့ကြသည်ဘယ်အရာကိုထောက်ပြသူကို Self-ဖြောင့်မတ်သခင်ခဲ့ကြသည်။
အခြားသောလမ်းဖော်ပြထားသည်ဖာရိရှဲများအများအပြားလျှို့ဝှက်ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်ခဲ့သည်။ ဖာရိရှဲတို့ဓမ်မဟောငျးကမျြးပညတ္ပညာတတ်ခဲ့ကြသည်သောကြောင့်, လူတွေညျဘုရားသခငျ၏ညွှန်ကြားချက်များပင်အသေးဆုံးအသေးစိတ်ကိုမနာခံခဲ့ကြရသောအခါ၎င်းတို့သည်သိတယ် - သူတို့အထဲကညွှန်ပြခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောလွန်ကျူးခြင်းရှုတ်ချအတွက်ရက်စက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သျောလညျး, တစ်ချိန်တည်းမှာ, သူတို့ကလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လောဘ, မာနထောင်လွှားနှင့်အခြားအဓိကအပြစ်များကိုလျစ်လျူရှု။
ကိုယူ 10 ပညတ်တော် ဥပမာ။ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအသိများများက - အဆိုပါစတုတ္ထပညတျကလူသည်ဥပုသ်နေ့၌သူတို့၏အလုပ်ကနေငြိမ်ဝပ်စွာနေသင့်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ သငျသညျပိုမိုနက်ရှိုင်းတူးရန်စတင်သောအခါ, အချို့ကိုသင်ခက်ခဲမေးခွန်းများကိုလှန်။ အဘယ်အရာကိုဥပမာ, အလုပ်သွင်းစဉ်းစားသင့်သနည်း လူတလယ်သမားတစ်ဦးအဖြစ်သူ၏အလုပ်လုပ်နာရီပေါင်းပါလျှင်သူသည်ဥပုသ်နေ့၌ပန်းပွင့်ကိုစိုက်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်နေဆဲလယ်ယာစိုက်ပျိုးထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းအဘယျသို့ခဲ့သလဲ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အပတ်အတွင်းအဝတ် လုပ်. ရောင်းချခဲ့ပါလျှင်သူမသည်သူမ၏မိတ်ဆွေတစ်များအတွက်လက်ဆောင်အဖြစ်စောင်စေရန်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်ကြောင့်အလုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်ခဲ့သလဲ
ရာစုနှစ်ကျော်, ဂျူးကလူသညျဘုရားသခငျ၏ပညတျနှငျ့ပတျသကျသောအစဉ်အလာများနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှာများစွာသောသဘောတူညီချက်စုဆောင်းခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားအစဉ်အလာ, မကြာခဏ Midrash ကိုခေါ် , သူတို့ပညတ္တိကျမ်းစကားကိုနားထောငျနိုင်အောင်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ပိုကောင်းပညတ္တိကျမ်းကိုနားလည်ကူညီရန်ထင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ဖာရိရှဲတို့သညျဘုရားသခငျ၏မူလဥပဒေတွေထက်ပင်ပိုမိုမြင့်မားသည့် Midrash ညွှန်ကြားချက်ကိုအလေးပေးသောတစ်လည်ချောင်းနာအလေ့အထရှိခဲ့ - သူတို့ပညတ်တရား၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူချိုးဖောက်သူတွေကိုဝေဖန်နှင့်အပြစ်ပေးအတွက် remorseless ခဲ့ကြသည်။
တံစို့အလားအလာအလုပ်ခဲ့သည့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးပါလိမ့်မယ်ရသောဖုန်သင်္ဂြိုဟ်မယ့်အမျိုးအနွယ်ကို, ကိုစိုလို့ - ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ထိုသို့ဥပုသ်နေ့၌ကာလအတွင်းမြေပြင်ပေါ်တွင်တံတွေးထွေးဖို့ဘုရားသခငျ၏တရားဆန့်ကျင်ခဲ့ယုံကြည်သောသူသည်ယေရှု၏နေ့ရက်ကာလ၌ဖာရိရှဲတို့ရှိခဲ့သည်။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ပေါ်ထိုကဲ့သို့သောအသေးစိတ်နဲ့ Hard-to-အတိုင်းလိုက်နာမျှော်လင့်ချက်များအားမရခြင်းအားဖြင့်, သူတို့အစားဖြောင့်မတ်ခြင်းထက်, အပြစ်ရှိတယ်နဲ့ဖိနှိပ်မှုထုတ်လုပ်ထားတဲ့နားမလည်ကိုယ်ကျင့်တရားကုဒ်သို့ဘုရားသခငျ၏တရားလှည့်။
ယရှေုသညျဿုံမဿဲ 23 ၏အခြားသောအဘို့ကို၌ဤသဘောထားကိုရုပ်ပြ:
23 "သင်မင်္ဂလာရှိ၏, ပညတ်တရား၏ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ဖာရိရှဲတို့, သင်လျှို့ဝှက်! သင်သည်သင်၏နံ့သာ-ပူစီနံ, ဇီယာစေ့နဲ့ဇီ၏ဆယ်ဘို့တဘို့ပေးပါ။ သင်တို့မူကားပညတ္တိကျမ်း-တရားမျှတမှု, ကရုဏာနှင့်သစ္စာ၏ သာ. အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များလျစ်လျူရှုခဲ့ကြသည်။ သငျသညျယခင်လျစ်လျူရှုထားခြင်းမရှိဘဲ, အဆုံးစွန်သောလေ့ကျင့်ကြသင့်ပါတယ်။ 24 သင်သည်လမ်းပြလူကန်းတို့, သင်တစ်ဦးခြင်ကောင်ထွက်စစ်ကားကုလားအုပ်ကိုမျို။ "
မဿဲ 23း23-24
နိကောဒင်ကောင်းတစ်ဦးကိုဖာရိရှဲ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် - သူသညျယရှေုနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အခြားအကြောင်းအရာများ (ယောဟန်3ကိုကြည့်ပါ) နှင့်အတူကယ်တင်ခြင်း၏သဘောသဘာဝဆွေးနွေးရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။ နိကောဒင်နောက်ဆုံးမှာရိမသဲမြို့သားယောသပ် (: 38-42, ယောဟန် 19 ကိုကြည့်ပါ) ကိုကားစင်တင်ပြီးဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိလမ်းအတွက်ယရှေုသညျသင်ျဂွိုဟျကူညီပေးခဲ့သည်။
ဂါမလျေကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်သလိုပဲသူကိုအခြားဖာရိရှဲဖွစျ၏။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ (: 33-39 တမန်တော်5ကိုကြည့်ပါ) ယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပြီးနောက်အစောပိုင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကိုတိုက်ခိုက်ချင်ခဲ့သောအခါသူဘုံသဘောမျိုးနဲ့ဉာဏ်ပညာနှင့်အတူနှုတ်ဆက်လေ၏။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့တမန်တော်ပေါလုဖာရိရှဲသည်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ခွင့်ပြုသူသည်ညှဉျးဆဲဖမ်းဆီးအကျဉ်းချ, ပင် (တမန်တော် 7-8 ကိုကြည့်ပါ) ယေရှု၏တပည့်ကွပ်မျက်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း start ကိုပြု၏။ ဒါပေမဲ့ဒမာသက်မြို့သို့လမ်းပေါ်တွင်ထမြောက်တော်မူခရစ်တော်နှင့်အတူသူ၏ကိုယ်ပိုင်တှေ့ဆုံအစောပိုင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းများ၏အရေးပါသောမှတ်တိုင်သို့သူ့ကိုအသွင်ပြောင်း။
ယောန 4: သမ်မာကမျြးအခနျးအကျဉ်းချုပ်
ယရှေုသညျတစျဖနျ (32-34 မာကု 10) သူ၏မရဏခန့်မှန်း
New International Version (တို့သည်)
မဟာစီးပွားပျက်ကပ်၏ထိပ်တန်း5အကြောင်းရင်းများ
Beginners များအတွက်ပြင်သစ်: သင်ခန်းစာများနှင့်သိကောင်းစရာများ
သင့်ရဲ့ Scuba ဂီယာကိုဆေးကြောဖို့ကိုဘယ်လို
ဗင်းဆင့်ဗင် Gogh နေဖြင့် 10 အများစုမှာ-ချစ်ရသူပန်းချီကား
အီတလီနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးမျက်မှောက်တွင်ကြည့်ပါရန်5ခရီးသွားစကားစုများ
အမေရိကန်သမိုင်းထဲမှာဗိုလ်မှူး Utopian လှုပျရှားမှုများစာရင်း
ကိုထပ်တိုး (ဝေါဟာရရငျးမွစျ General)
20 ရာစု 100 နာမည်ကြီးအမျိုးသမီးများ
အင်္ဂလန်၏ဟင်နရီ V ကို
လုပ်ပြီး Buddy Holly ရဲ့မုဆိုးမကဘယ်သူလဲ
ဟောငျး ACT ရမှတ် Find လုပ်နည်း
Walruses အကြောင်း 10 အချက်အလက်
ငါးဖမ်းလိုင်း: ခွန်အား Breaking အကြောင်းအမှန်တရား